Dib-u-fikirka B2B Suuq Gelinta? Waa tan Sida Loogu Xullo Ololaha Guusha | Martech Zone
Tuesday, May 19, 2020 Khamiis, May 21, 2020 Bonnie Crater
Maaddaama suuqleydu ay hagaajinayaan ololeyaasha si ay uga jawaabaan hoos u dhaca dhaqaale ee ka imanaya COVID-19, waa ka muhiimsan tahay sidii hore in la ogaado sida loo xusho kuwa guuleysta. Qiyaasaha dakhliga-ku-tiirsan ayaa kuu oggolaanaya inaad u qoondeyso kharash si wax ku ool ah.
Waa warxumo laakiin run: xeeladaha suuqgeynta ee shirkadaha ay bilaabeen hirgelinta Q1 2020 way duugoobeen markii Q2 wareegayay, oo ay qarxiyeen xiisadda COVID-19 iyo hoos u dhaca dhaqaale ee ka imanaya aafada. Cawaaqibta ganacsiga waxaa ka mid ah tobanaan milyan oo ay saameysay dhacdooyinka la joojiyay. Xitaa sida gobolada qaar ay tijaabiyaan dib u furista, cidna runti ma oga goorta howlaha ganacsi sida waddooyinka iyo shirarka warshadaha ay dib u bilaaban doonaan.
Suuqyayaashu waa inay dib uga fikiraan qorshayaashooda wacyigelinta iyadoo la tixraacayo isbeddeladan. Qeybo badan oo suuq-geyn ah ayaa leh ololeyaasha dib loo dhigay iyo miisaaniyadda oo la dhimo. Laakiin xitaa kooxaha suuq geynta ee horay ugu sii soconaya uumiga buuxa waxay hagaajinayaan istiraatiijiyadooda si ay uga tarjumaan xaqiiqooyinka suuqa cusub iyo hagaajinta ROI. Dhanka B2B gaar ahaan, kordhinta tartanka ayaa kadhigi doonta mid lagama maarmaan ah in la hubiyo in dollar kasta oo ka yimaada miisaaniyadda calaamadeynta ay soo saarto dakhli - iyo in suuqleydu ay caddeyn karaan.
Qaar ka mid ah suuqleyda B2B ayaa dib u habeyn ku sameeyay qaabkooda iyaga oo u beddelay qarashkii horay loogu qoondeeyay dhacdooyinka, hadda kanaalada dhijitaalka ah. Taasi waxay noqon kartaa mid wax ku ool ah, gaar ahaan haddii ay wax ka beddeleen astaamaha Macmiilkooda Fiican si loola xisaabtamo xaaladaha dhaqaale ee cusub. Daryeelka waxyaabaha kale ee aasaasiga ah sida lafagurida cabbiraadaha jaangooyada si sax ah loogu tiiriyo dakhliga ololeyaasha sidoo kale macno ayey sameyneysaa, sidoo kale tijaabinta isku-dhafka kala duwan ee farriimaha, noocyada nuxurka iyo kanaalada si loo go'aamiyo waxa ugu wanaagsan ee shaqeynaya.
Marka waxyaabaha aasaasiga ah wax laga qabto, waxaa jira dhowr siyaabood oo aad ku baari karto xogta heer aad u adag si aad u ogaato in barnaamijyadaada suuqgeynta dhijitaalka ah ee B2B ay si hufan u shaqeynayaan oo ay go'aaminayaan kuwa keenaya natiijooyinka ugu wanaagsan xagga dakhliga. Qiyaasaha xalka dhibcaha suuq geynta dhijitaalka ah ayaa bixin doona ayaa kuu sheegi doona ol’olaha ay soo saarayaan qasabno iyo aragtiyada bogga, taas oo waxtar leh. Laakiin si loo sameeyo quusin qoto dheer, waxaad u baahan doontaa xog bixinaysa aragti ku saabsan saameynta ololaha ee dakhliga iyo iibka.
Fiirinta xogta ololaha jiilka baahida taariikhiga ah waa meel fiican oo laga bilaabi karo. Waad falanqeyn kartaa kala qaybsanaanta u dhexeysa fidinta dijitaalka iyo kuwa aan dijitaalka ahayn oo aad go'aan ka gaari kartaa sida gabal walba u kaxeeyo iibka Taasi waxay u baahan doontaa qaab astaan ​​olole. Habka "taabashada ugu horreysa" ee dhibcaha ayaa horseedda la kulanka ugu horreeya ee shirkaddu la yeelatay macaamil mustaqbal ahaan waxay caadi ahaan muujin doontaa in ololeyaasha dijitaalku door weyn ka ciyaaraan soo saarista xiisaha macaamiisha cusub
Waxay sidoo kale iftiimin kartaa si loo ogaado ololeyaasha saamaynta ugu badan ku yeeshay. Jaantuska hoose wuxuu muujinayaa sida ololeyaasha dijitaalka ah iyo kuwa aan digital-ku ahayn ay saameyn ugu yeesheen iibinta hal tusaale:
Hoos u dhigista xogta taariikhiga ah sidan oo kale waxay ku siin kartaa aragti muhiim ah markaad dib u cusbooneysiineyso istiraatiijiyadda suuqgeynta si aad u xoojiso ololeyaasha dijitaalka ah. Waxay kaa caawin kartaa inaad xulato guuleystayaasha markaad tixgelinayso dhowr ikhtiyaar oo kala duwan.
Qiyaasaha xawaaraha ayaa ah qayb kale oo muhiim ah doorashada ololeyaasha guuleysta. Xawaaruhu wuxuu sharraxayaa waqtiga (maalmo gudahood) ay qaadanayso in hoggaanka loo beddelo iib. Habka ugu fiican ayaa ah in la cabbiro xawaaraha heer kasta oo ka mid ah suuq-geynta suuqgeynta iyo iibinta. Markaad ubaahantahay inaad dhakhso uhesho dakhli, waxaad ubaahantahay inaad hubiso inaad ogaan karto oo aad baabiin karto culeysyada jira ee howlaha. Cabirka xawaaraha heer kasta oo masaf ah ayaa sidoo kale bixisa aragti ku saabsan sida wax ku oolka ah ee aad u hagaajisay ay yihiin.
Jaantuska hoose wuxuu muujinayaa tusaale xawaaraha suuqgeynta suuq geynta u qalma (MQLs) markii ay sii dhex mareen qulqulka sanadka 2019 iyo rubuca koowaad ee 2020:
Sida xogta tusaalahani muujineyso, kooxda suuq geynta ayaa si weyn u wanaajisay natiijooyinkooda Q1 2020 markii la barbardhigo Q1 2019. Aragtidaasi waxay siineysaa kooxda macluumaad qiimo leh oo ku saabsan xawaaraha suurtagalka ah ee barnaamijyada la hirgeliyay intii lagu jiray labadaas waqti. Suuqyayaashu waxay u adeegsan karaan aragtidaas si ay u xawaareeyaan waqtiga dakhliga horay u socda.
Qofna ma oga dhab ahaan waxa mustaqbalku keeni doono maaddaama ganacsiyadu dib u furmay iyadoo lagu saleynayo qaab-goboleed iyo dhaqdhaqaaqa dhaqaale oo kor u kacaya. Suuqgeyaasha B2B mar hore ayay ahayd inay hagaajiyaan istiraatiijiyadooda ololaha, waxaana laga yaabaa inay u baahan yihiin inay mar labaad dib u dhigaan markay arrimo cusub soo baxaan. Laakiin inta lagu jiro waqtiyada aan la hubin, awoodda lagu soo xulo kuwa guuleysta ayaa ka muhiimsan sidii hore. Iyada oo xogta saxda ah iyo awoodaha falanqaynta, waad sameyn kartaa taas.
Tags: suuq geynta b2bCOVID-19suuqgeynta hoggaamiyeyaasha u qalmamqlwacyigeliniibinta jilitaanka
Bonnie Crater waa Madaxweynaha & agaasimaha guud ee Fahamka Wareegga oo Buuxa. Kahor inta uusan ku biirin Full Circle Insights, Bonnie Crater wuxuu ahaa madaxweyne ku-xigeenka suuq-geynta VoiceObjects iyo Xaqiijinta. Bonnie sidoo kale wuxuu qabtay kuxigeenkiisa iyo doorka kuxigeenka sare ee Genesys, Netscape, Network Computer Inc., salesforce.com, iyo Stratify. Halyeey toban-sano jir ah oo ka tirsan shirkadda Oracle Corporation iyo faracyadeeda kala duwan, Bonnie wuxuu ahaa madaxweyne-ku-xigeen, Qeybta Compaq Products iyo madaxweyne ku-xigeenka, Qeybta Wax soosaarka Workgroup.
MVRK: Daahfurka 3D Dhacdo Faneed